चिटिक्क ! पारिदै विमानस्थल - Nepalese Fast Update Tourism News Portal | अतिथि देवो भवः
चिटिक्क ! पारिदै विमानस्थल
काठमाडौं, पुष ९ । ‘वेलकम टु नेपाल’ लेखिएको फ्रेम टर्मिनल छिर्ने ढोकैनेर ठूलो अक्षरमा देख्न सकिन्छ । जसमा नेपालको कला, संस्कृति झल्कने छ । चारवटा गाग्राको घडा राखेर सजाइएको छ भने सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्ष चिनाउनका लागि बनाइएको ‘सेल्फी प्वाइन्ट’ पर्यटकहरुका लागि सेल्फी फोटो खिच्न ‘सेल्फी जोन’ पनि बनाइएको छ साथै गरुडको मूर्ति पनि देख्न सकिन्छ । ताउलोमा सजिएका फूल, पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, मठ, मन्दिर झल्कने तस्बिरहरुले मोहित तुल्याउँछ । पर्यटक आगमन कक्षमा जीवित देवी कुमारीको मूर्ति पनि छ ।
यो सबै कुनै सङग्रालयको बर्णन होईन मुलुकको एक मात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल ९त्रिअवि० कोे यथार्थ चित्रण हो । पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको रूप फेरिदै गएको देख्न सकिन्छ । विमानस्थलको भित्री रूप आकर्षक तरिकाले सुधारिएको छ भने बाहिर पनि आकर्षक ढङ्गले सजाइँदैछ । विमानस्थलको स्तरोन्नत्तिका साथै सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई पर्यटकलाई आकर्षित बनाउनका लागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी जिम्मेवारीको परिणाम विमानस्थलको भित्री दृश्यले भल्काई रहेको छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले बुटिक विमानस्थलको रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विमानस्थलको आगमन कक्षमा मुख्य चाडपर्व र समय अनुसारका संस्कृति झल्कने विविध सामग्रीले सजाइने छ । भुइँमा कार्पेट बिछ्याइएको छ भने छेउछेउमा नेपाललाई चिनाउने दृश्यहरूका साथ घडा भरिएका कलश राखिएका छन् । आगमनबाट बाहिरिने बित्तिकै १० वटा हरियो र १० वटा कालो प्लेट नम्बरका ट्याक्सी लस्करै देख्छिन् । यात्रुलाई चढ्न मन लागे चढ्छन् नत्र आफ्नै व्यवस्थाले गन्तव्य पुग्छन् । विमानस्थलबाट अलि तल आउँदा व्यवस्थित पार्किङमा भरिभराउ सवारी साधन प्रतिक्षामा छन् । इच्छाअनुसार गन्तव्य पुग्न सकिन्छ । विमानस्थलको पार्किङ परिवर्तन असाध्यै प्रभावकारी बनेको छ भने चोरी लुटपाट डकैती जस्ता घटनाहरुलाई न्यूकिरण गर्नको लागी सुरक्षा जडित यन्त्र सिसिक्यामेरा पनि जडान गरिएको छ । विमानस्थल प्रवेशका लागि मुख्यद्वार (गोल्डेन गेट) बाट प्रवेश मात्र गर्न पाइनेछ भने फर्कँदा नवनिर्मित ट्याक्सी पार्किङ क्षेत्रको गेटबाट बाहिरिनुपर्नेछ । विमानस्थलको शौचालयहरु पनि सफा देख्न पाइन्छ भने सफाइका लागि कर्मचारीहरु पनि खटाइएको छ ।